ခေတ်ပြိုင် | Save Burma | Page 2
အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးမှ တတိုင်းပြည်လုံး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ခံစားရမယ် Archive for the ‘ခေတ်ပြိုင်’ Category
မေး - ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ မြန်မာပြည်ကို စစ်အစိုးရ အာဏာသိမ်းစေမယ့် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အမေရိကန် အစိုးရအနေနဲ့ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်လို့ ဆရာ ပြောခဲ့တယ်နော်။ ကျနော်တို့ နားမလည်တဲ့ ဇာတ်ကွက်တို့၊ နောက်ကြောင်းတို့က ဘာတွေပါလဲ။ ယူကေနိုင်ငံက မြန်မာပြည်မှာ အကြီးအကျယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတို့၊ စောစောပိုင်းမှာ အမေရိကန်က လက်နက် ရောင်းတာတို့၊ မကြာသေးခင်က စစ်အစိုးရကို အစ္စရေးက လက်နက်ရောင်းတာတို့လိုမျိုးတွေရဲ့ အကျိုးဆက်က ဘာတွေများဖြစ်မလဲ။ စစ်အစိုးရကို ရေနံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှယ်ဗရွန် ရေနံကုမ္ပဏီက ဒေါ်လာတွေ သန်းပေါင်းများစွာ ထောက်ပံ့ပေးနေတာမျိုးရဲ့ အကျိုးဆက်ကရော ဘာပါလဲ။
ဖြေ - ၁၉၅၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်က မြန်မာအစိုးရဟာ အရွေးချယ်ခံအစိုးရအဖွဲ့နည်းနည်းထဲက အစိုးရဖြစ်ပြီး ကြားနေ၀ါဒ ကျင့်သုံးလိုတဲ့သဘောရှိတယ်။ အဲဒီအချိန် အိုင်ဆင်ဟောင်ဝါ အမေရိ ကန် အစိုးရကလည်း အာရှနိုင်ငံတွေကို စစ်အေးတိုက်ပွဲထဲ ဆွဲသွင်းဖို့ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းနေ တယ်။ အဲသလို အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်၊ အစိုးရ ဖြုတ်ချရေးလုပ်ရပ်တွေ ခြေလှမ်းကျယ်ကျယ်နဲ့ လုပ်နေမှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တရပ်အနေနဲ့ ၀ါရှင်တန်အစိုးရဟာ လက်နက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ကိုင်ဆောင် ထားတဲ့ တရုတ်ဖြူတပ်ဖွဲ့တွေကို တရုတ်နိုင်ငံတွင်း နယ်စပ်စစ်ဆင်ရေးတွေလုပ်ဖို့ မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်းကို သွင်းပါလေရော။ ဒီကိစ္စကို မြန်မာဘက်က တားဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေ မယ့် တားလို့မရဘူး။ တရုတ်ဖြူတွေက မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းက တိုင်းရင်း သား သောင်းကျန်းသူတွေကို လက်နက်နဲ့ အထောက်အပံ့တွေ ပေးတယ်။ ဒီတော့ အပြန်အလှန် အနေနဲ့ နောက်ဆုံး မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်လက်ထဲ အာဏာရောက်သွားပြီး နောက်ဆုံး ၁၉၆၂ ခုမှာ အာဏာသိမ်းတဲ့ထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရဖြုတ်ချရေး လုပ်ရပ်ကို နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအဖြစ် အော်ဒ ရေးနဲ့ ဂျော့ခ်ျကဟင်တို့က ဒီကိစ္စကို ဆွေးနွေးကြတယ်။ ဂျော့ခ်ျကဟင်က နာမည်ကျော် အရှေ့ တောင်အာရှ ပညာရှင်တွေထဲမှာ တယောက်အပါအ၀င်ပဲ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ပညာရေး စည်းမျဉ်းကို တည်ထောင်သူလို့တောင် တင်စားပြောနိုင်သူဖြစ်တယ်။ ခင်ဗျားပြောခဲ့တဲ့ အမေရိကန်၊ ယူကေနဲ့ အစ္စရေးတို့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကတော့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ပိုပြီး အင်အားတောင့်တင်းသွားစေတာပေါ့။ အဲဒီကိစ္စတွေကို အထူး ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတွေကလွဲပြီး အမေရိကန်မှာ အစီရင်ခံခဲ့တာမျိုးလည်း မရှိခဲ့ဘူး။ လူမသိခဲ့ဘူး။ ဘာဖြစ် လို့လည်းဆိုတော့ အမေရိကန်တွေက “ငါတို့ပဲကောင်းတယ်”၊ “သူများတွေဆိုးတယ်” ဆိုတဲ့
ဖြေ - ကျနော်ဒီမေးခွန်းကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဖြေရလောက်အောင်လည်း သေသေချာချာ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မျိုးမှာတော့ အသတ်ခံရမယ်လို့ ထင်တာပဲ။ တဖက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း စစ်ခေါင်းဆောင်တွေလည်း အသက်တွေ ရလာပြီဆိုတော့ သူတို့အာဏာကို ပွန်းပဲ့စေမယ့် ထင်ရှား တဲ့ ဖီဆန်ရေး အင်အားစုတွေ စစ်တပ်ထဲမှာ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
မေး - ဂျော့ခ်ျဘုရ်ှနဲ့ ဇနီးလော်ရာတို့က မြန်မာပြည်တွင်း ပြောင်းလဲရေးအတွက် တောင်းဆိုနေတဲ့ အပေါ်မှာ မရိုးသားတဲ့အချက်များ တွေ့မိလား။ ဆိုင်ကလုန်းလွန်ကာလ ဒုက္ခခံနေရတဲ့ မြန်မာ ပြည်သူတွေကိုယ်စား အမေရိကန်သမ္မတ ဘုရ်ှလုပ်ရပ်တွေဟာ အီရတ်တို့ အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ကို ကျူးကျော်တာမျိုးဆိုတာထက် လူ့ကျင့်ဝတ်အရ တရားမျှတရေးကို ပိုပြီးဇောင်းပေးတယ်လို့ ထင်ပါသလား။
ဖြေ - ဘုရ်ှက ယုံကြည်မှု နက်ရှိုင်းတဲ့ ခရစ်ယာန်တယောက်အဖြစ် ဟန်ပြရတာ သဘောကျတဲ့ လူမျိုး။ ခရစ်တော်ရဲ့ အဟောတွေကိုလည်း သူလေ့လာရင် လေ့လာခဲ့မှာပါ။ လေ့လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ခရစ်တော်အဟောမှာ ကြောင်သူတော်ဆိုတဲ့ နာမည်ကျော် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို သူသိမယ်။ အဲဒီ ဖွင့်ဆိုချက်ကို သူ့ခေါင်းထဲမှာ ကောင်းကောင်းမှတ်ထားတာဖြစ်မယ်။ ဘုရ်ှမောင်နှံအနေနဲ့ သူတို့မှာ ရိုးသားမှုဆိုတာ ရှိနေရင် ရိုးသားမှုကို ပြနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေ အများကြီး ရှိနေတယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်လို့ရတာပဲ။ ဆဒ္ဒမ်ဟူစိန်အနေနဲ့ ဟာလက်ဘ်ဂျာမှာ ကာ့ဒ်လူမျိုးတွေကို ဓာတ်ငွေ့ပေး သတ်တာထက် ငတ်မွတ်နေတဲ့ ကလေးတွေကို ငွေကြေးနည်းနည်းပါးပါး ထောက်ပံ့မယ်ဆို လူ့ကျင့်ဝတ်အရ ပိုပြီး ဆီလျော်တာပေါ့လေ။ နာဂစ်နဲ့ အီရတ်၊ အာဖဂန်အရေးတွေမှာလည်း အလားတူ ဖြစ်ရပ်တွေ ရှိနေတာကို တွေ့ရတယ်။
မေး - မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းအုံကြွမှု အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင် တရုတ်နိုင်ငံက ဘယ်လို တုံ့ပြန်မယ်လို့ ထင်ထားလဲ။
မေး - မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေ၊ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ၊ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ဘယ်လိုဟာတွေက အဆင်ပြေသွားစေနိုင်မလဲ ဆိုတာတွေကို ထဲထဲဝင်ဝင် ပြောပြနိုင်တာများ ရှိမလား။
မေး - စစ်အစိုးရကလည်း တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်း နိုင်ငံရဲ့ သဘာဝ အရင်းအမြစ်တွေကို ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် ခိုးဝှက်တယ်။ လူသတ်မှုတွေ ကျူးလွန် တယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းချမှုတွေ၊ အဓမ္မ လုပ်အားပေးခိုင်းစေတာတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ခံရတဲ့ ပြည်သူတွေက လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်ထကြွကြတာကို လူ့ကျင့်ဝတ်အရ မျှတတယ်လို့ ပြောနိုင် ပါသလား။
ဖြေ - ကျနော့်အမြင်ပြောရရင်တော့ ကန့်သတ်ချက်တခုနဲ့ မျှတတယ်လို့ ပြောနိုင်တာပေါ့။ ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် နောက်ဆက်တွဲ ကြုံရမယ့် ပြဿနာတွေကို လက်နက်ကိုင် အုံကြွမှုက သတိ ထား အကဲဖြတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ ထကြွတာ သင့်တော်တယ် လို့တော့ ကျနော်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူတွေကို အစုလိုက် အပြုံလိုက် အသတ်ခံဖို့ စတေး ကြလို့ ကျနော် ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်တာမျိုး ကလည်း လူသတ်သမားတွေကို သတ်တာ သင့်တော်ရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးနဲ့ အရမ်းတူတယ်။ သူတို့တွေကို အကြမ်းမဖက်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ဖမ်းဆီးတာမျိုးဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်။ ဒါကို သူတို့က သေနတ်ဆွဲပစ်မယ်ဆိုရင်တော့ မိမိကိုယ်ကိုယ် ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အနေနဲ့ သူတို့ကို ပြန်ပစ်သတ်ရတာ သဘာဝကျတယ်။ တခြားရွေးစရာလမ်းလည်း မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့လေ။
Tagged with Burma, Chomsky, Junta, Myanmar, Non-violent, Uprising, US	ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ (စီအာပီပီ) အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်နှင့် ခေတ်ပြိုင်မေးမြန်းခန်း
ဖြေ- ဟုတ်ကဲ့… ကျနော့်အမြင် ပြောရမယ်ဆိုရင်… ဒီလို လုပ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ ကြိုတင်ပြီး တော့ ကြားထားတာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ဘယ်နှလအလို ဘယ်နှလပဲ ရှိတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ သိပ်စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ကျနော်တို့က အခု ပြီးခဲ့တဲ့ referendum အပါအ၀င် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို ကျနော်တို့က စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ဒီ Road map အပါအ၀င် အဆင့်ဆင့်သော လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာ တကယ့် တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်တွေလို့လည်း မမြင်သလို ဒီလို လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်မှာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ရလိမ့် မယ်လို့လည်း မယုံကြည်ဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ တကယ့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားဖို့ လိုသလို၊ တိုင်းရင်းသားတွေအပါအ၀င် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ် ရေးကို တည်ဆောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် နအဖ အပါအ၀င် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်သည် ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာကနေတဆင့် အမျိုးသားလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ချမှတ်ပြီးတော့ သွားမှသာလျှင် အနာဂတ်မှာ တိုင်းပြည်အတွက်ရော ဒီနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ အများ ပြည်သူအတွက်ပါ အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ မြင်လို့ပါ။
Written by Lwin Aung Soe July 9, 2008 at 12:00 pm
Tagged with ဇူလိုင်လ (၇)ရက် အရေးေ	ဧရာဝတီတိုင်းအရေး မကြာခင် တပြည်လုံးအရေး ဖြစ်တော့မည်
Tagged with တိုကျို မြန်မာ သံရံ�, Burmese Embassy in Tokyo, Pro-democracy activists, Refrerendum, Riot, Vote	၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များကို ပုံနှိပ်ဥပဒေဖြင့် တရားစွဲ
Tagged with 88 Generation Students	ခေတ်ပြိုင် – ကလေးစစ်သားမသုံးဟု တိုင်းရင်းသား လက်ကိုင်အဖွဲ့များငြင်းဆို
ကလေးစစ်သားမသုံးဟု တိုင်းရင်းသား လက်ကိုင်အဖွဲ့များငြင်းဆို ကျော်ထင်(ထိုင်း)/ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇
“သက်သေအထောက်အထားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါတွေရှိရဲ့သားနဲ့ ကျနော်တို့ကို
၀ါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်းတယ် ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့အတွက် မကောင်း…..” အပြည့်အစုံသို့
ကေအင်အယ်လ်အေ စစ်ဦးစီးချုပ် စိန်ခေါ် NEJ/ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇
“ဒီကလေးစစ်သားကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယူအန်က တာဝန်ပေးမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ဆီမှာလာပြီး လေ့လာနိုင်တယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း ပြချင်…..” အပြည့်အစုံသို့
Written by Lwin Aung Soe November 27, 2007 at 2:49 pm
ခေတ်ပြိုင် အယ်ဒီတာ အာဘော် တပ်မတော်စိတ်ဝမ်းကွဲသော်လည်း ခေါင်းမထောင်ဝံ့ကြ အခြေအနေမှန်မှာ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တိုင်း သွေးဆာနေသူများ မဟုတ်။ ပညာဥာဏ် ကင်းမဲ့သူများ မဟုတ်ကြသောကြောင့် တပ်မတော်တွင် စစ်ဦးစီးချုပ်နှင့် လက်အောက်ခံ အရာရှိများ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုများ ကြီးစွာရှိနေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ တိတိကျကျ ဆိုရလျှင် အလောင်းမင်းတရားကြီး (၁၁၁၇) ခုက တည်ထားခဲ့သော ရန်ကုန်မြို့ကို စွန့်ခွာကာ ကြတ်ပြေးရွာကို နေပြည်တော် တည်ဆောက်ရန် စစ်ဦးစီးချုပ်က ဆုံးဖြတ် အမိန့်ပေးစဉ်ကပင် တပ်မတော် စိတ်ဝမ်းကွဲမှု စတင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ကာလရှည်ကြာစွာ အတူအမှုထမ်းကြရင်း ဗိုလ်သန်းရွှေ အဆိပ်ပြင်းပုံကို သိကြသဖြင့် တော်လှန်ခြားနားဝံ့ရဲသူ စစ်အရာရှိတဦးမှ မရှိသောကြောင့် ဗိုလ်သန်းရွှေ ဆက်လက် သရဖူဆောင်းနေနိုင်ခဲ့သည်။ … အပြည့်အစုံသို့
Written by Lwin Aung Soe November 26, 2007 at 2:34 pm
Irrawaddy / Khit Pyaing: website URL for temporary use ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပေးသော ခြံထွက်ဗူးသီး၊ သရက်သီးနဲ့ ကဒက်ချဉ် လက်ဆောင်အပေါ် ဝေဒပညာရှင်တစ်ဦးအမြင်...
ထောင်ချသော်လည်း ကြောက်ရွံ့နောက်တွန့်မည် မဟုတ် (အင်တာဗျူး) Did Than Shwe’s Grandson Kidnap Model?
Mizzima (Burmese)ပြည်ထောင်စုအဆင့် တက်နိုင်ရန် အပစ်ရပ် ခိုင်မာဖို့လိုဟု KNU ပြော August 6, 2012အိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာအားကစားသမားများ ရလဒ်များ မကောင်း August 4, 2012ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ပြီး ရန်ကုန်ပြန် August 20, 2011ICC အမြန်ရောက်လိုသူ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဦးထူးထူးဟန် July 20, 2011နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၆ ဦး လွတ် May 17, 2011ပုဂံလက်ဆော့ March 1, 2011အင်းစိန်ဗုံး ၈ ဦး ဒဏ်ရာရ February 28, 2011မြသန်းတင့် ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၃ နှစ်ပြည့် February 23, 2011 VOA (မြန်မာ)An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အားAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.လူထုအသံ	RFA (Burmese)ပိတ်ဆို့မှုတွေ အဆုံးသတ်ဖို့ အမေရိကန်အမတ် ထောက်ခံဗြိတိန် လွှတ်တော်အမတ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အကြောင်း ရှင်းလင်းဖားကန့်မှာ ကျောက်စိမ်းတွင်းပြို ၃ ဦး သေဆုံးမောင်တောမှာ မွတ်စလင် လူဦးရေ တိုးပွားမှုနှုန်း ထိန်းချုပ်မိန့် ထုတ်ပြန်မိတ္ထီလာ အရေးပေါ် ကာလ နောက်ထပ် နှစ်လတိုးမိတ္ထီလာမှာ သံဃာတော် သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ ၇ ဦးကို ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ် Burma Digest InfoAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. Mizzima (English)Burma ‘more free’ than China, says US think-tank January 17, 2013Earthquake rescue teams struggle to cope November 13, 2012PepsiCo opening bottling plant in Burma November 13, 2012Doctors without Borders face barriers November 12, 20126.8-magnitude earthquake rocks northern Burma, 12 dead November 12, 2012Obama visit should firm up US policy on Asia November 12, 2012Talks with Burmese gov’t ‘fruitful’: ABSDF November 12, 2012Whether to follow Thailand’s lead November 12, 2012 BBC (Burmese)အရေးပျေါ အခွနေေ ကွညောခကျြ သကျတမျးတိုးမှု ကို ဒျေါစု ဝဖေနျRafsanjani နဲ့ Mashaei တို့ကို ရှေးကောကျပှဲ ဝငျပွိုငျခှငျ့ မပေးဘုနျးကွီး သတျမှုနဲ့ ၇ ယောကျ ကို ထောငျခြ RSF AsiaAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later. CNN WorldArwa Damon: Freeze-frame moments March 22, 2013It was the war everyone just wanted to forget. But fromatiny red shoe in the rubble toaresident who rebelled against al Qaeda, CNN's Arwa Damon remembers the many freeze-frame moments caused by war.Jessica Lynch, others: Where are they now? April 16, 2013Ten years ago this week, President George W. Bush announced the United States and coalition forces had begun military action against Iraq. Here'salook back at some of the people who made headlines during the war.Photos: Enduring images March 19, 2013Troubled youth run 'old skool' bistro May 17, 2013Asajuvenile corrections officer in Southern California, Teresa Goines found it rewarding to work with troubled youth and help them turn their lives around.Pregnant and homeless: The real cost May 9, 2013Martha Ryan couldn't believe it. She had never heard of women who were pregnant and homeless. But in one night, she met three.Grieving dad helps kids get to chemo May 2, 2013For many children fighting cancer, it can be extremely tough to make it to their chemotherapy appointments.You won't believe what's in U.S. rivers April 18, 2013In the last 15 years, Chad Pregracke has helped pull more than 67,000 tires from the Mississippi River and other waterways across the United States. But that's just scratching the surface.'Brilliant Bus' shrinking digital divide April 5, 2013Working asaguidance counselor five years ago in Palm Beach County, Estella Pyfrom noticed that fewer students had access toacomputer after school. IPS Top newsU.S. Strategy on Water, Developmenta“Major Advance” May 22, 2013Stressed Ecosystems Leaving Humanity High and Dry May 21, 2013Organic Cooperative Proves that Agriculture Can Prosper in Cuba May 21, 2013Indigenous Brazilians Learn to Fight for the Right to Food May 21, 2013Seeking Justice for Dictatorship Victims – Two Continents Apart May 21, 2013Tackling Crime Takes on Import As Urban Populations Rise May 21, 2013Q&A: Guantanamo ‘Has No Right to Exist’ May 21, 2013UNFPA Focuses on Contraception for 222 Million in Developing World May 21, 2013Meta	Register	Log in